Manchester Derby: Mourinho & Guardiola Oo Isla Qaatay Inay Koob Sharaab Ah Wadaagaan Ciyaarta Kadib
HomeWararka MaantaManchester Derby: Mourinho & Guardiola Oo Isla Qaatay Inay Koob Sharaab Ah Wadaagaan Ciyaarta Kadib
Jose Mourinho iyo Pep Guardiola ayaa gees isaga leexiyey doodaha sheegayay inay dagaal iyo caqabad adag oo xamaasadeed ka dhalan doonto ciyaarta labadooda kooxood dhex maraysa ee Manchester derby – sidoo kalena, isla qaatay inay xataa koob sharaab ah wadaagi doonaan marka ay ciyaartu dhamaato.
Manchester United ayaa ku qaabili doonta kooxda ay isku magaalada yihiin, xafiiltanka ba’anina ka dhexeeyo ee Manchester City garoonka Old Trafford maalinimada Sabtida (2:30 galabnimo) mid kamid ah kulamadii Derbiga Manchester ugu adkaa mudo tobanaan sanno ah ee la wada sugayay.
Iyadoo labada kooxoodba waa United iyo City e ay kala hogaaminayaan laba tabobare oo cusub heerkooduna sareeyo’ oo ay Mourinho iyo Guardiola yihiin kuwo lagu qadariyo xirfada hogaaminta kooxaha kubbada cagta, kulamadii bilowga horyaalka sanadkan ee Premier League –na ay 100% guulo ku daah fureen.
Labada kooxoodba saylada ciyaaryahanada sanadkan, waxay ku kharash gareeyeen lacagihii ugu badnaa, iyadoo United ay kula soo wareegtay Paul Pogba aduun dhan £89m oo noqotay rikoodh cusub oo aduun, halka City oo siisatay £47.5m ciyaaryahan John Stones uu ka noqday difaacyahankii labaad ee ugu qaalisanaa taariikhda.
Laakiin tabobarihii hore ee Barcelona, Guardiola wuxuu carabka ku adkeeyey in xafiiltan shaqsi iyo colaad khaas ah oo uu u qabo tabobaraha hore ee naadiga Real Madrid, Mourinho ay tahay uun mid ay abuuraan “saxaafadu “.
“Taas awood uma lihin aanu ku xakamayno,” ayuu yidhi macalinka reer Spain. “Marar badan Ayaan sidaas sheegay – Qadarin badan Ayaan u hayaa Mourinho, Had iyo jeerna waxaan isku dayaa inaan wax ka korodhsado shaqsiyaadka aanu isku mihnada nahay – Isaguna kuwaas ayuu kamid yahay aan wax ka barto.
“Wuxuu ahaa tabobarahaygii, caawiyahaygii tabobare Sir Bobby Robson. Waa Caadi, markii u dambeysay ee Barcelona iyo Real Madrid labadayadaba may u ahayn wax fudud laakiin, laba jeer ayaanu kulanay, saddex todobaad ka hor waxaanu isugu nimid shirkii tabobarayaasha horyaalka ‘ Premier League.
“Dabcan, waan aqbali doonaa inaan koob sharaab ah la cabo haddii uu igu soo marti qaado ciyaarta kadib.”
Tabobaraha reer Portuqiis ee Mourinho ayaa isna yidhi: “Waan fahansanahay macnahay Derbi. Meel kasta waan kula soo ciyaaray, laakiin anigu had iyo jeer waxaan jeclahay inaan joogo meel xamaasada la kantaroolo. Haddii aanu doonayno inaanu guuleysano waa inaanu figta sare joogno.
“(City) waxay haysataa tabobare aad u wanaagsan. Waxay had iyo jeer leeyihiin ciyaaryahano aad u fiican, imikana kuwo kale ayay ku soo kordhisteen. Waxay yihiin waxay ahaayeen tan iyo markii aanu ku soo noqday England. Waa koox horyaalka inay qaado ku hirdanta, marka waa inaad awoodooda ixtiraamtaa.”
Taariikhda Kulamada Labada Kooxood
United iyo City midkood uun baa qaadayay 7 kamid ah 10 kii horyaal ee Premier League ugu dambeeyey.
171 kii ciyaarood ee hore u soo dhex maray labada kooxood ama ahaa Derbiga Manchester, United waxay badisay 71, City 49, halka 51 ciyaaroodna ay barbaro noqdeen.
Ciyaar xili ciyaareedkii 1973-74, ku dhex martay garoonka Maine Road, oo ahaa garoonkii hore ee City, waxaa qasab noqotay in si kumeel gaadh ah loo joojiyo kulanka, kadib markii laacibkii City ee Mike Doyle iyo ciyaaryahankii United ee Lou Macari ay diiday inay ka baxaan garoonka kadib markii kaadhka casaanka ah loo taagay. Kulankaas oo ahaa derbiga Man lugtiisii labaad ee xili ciyaareedka, United halyeygeedii Denis Law ayaa City u dhaliyey gool cidhib uu ku saxeexay markaas oo kooxda lagu naanayso shayaadiinta dharka cas lihi ay ka dhaadhacday horyaalka heerka koobaad.
City kama ay guuleysan kooxda ay xafiiltamaan hal ciyaar muddo 13 sanadood ah, laga soo bilaabo bishii September 1989, waxaanu ahaa kii ugu horeeyey ee ay ka badisaa ciyaartii u dambeysay ee ay ku ciyaarto garoonkeedii hore ee Maine Road markaas oo ay kooxdii tabobare Sir Alex Ferguson ku caraabisay 3-1.
Ciyaarihii mudooyinkan u dambeeyey, City waxay ku badisay 6-1 garoonka Old Trafford sanadii 2011, ciyaar intii ay socotay uu Mario Balotelli kula soo baxay isagoo u dabaal deggaya gool uu dhaliyey – qoraalkii funaanadiisa ku xardhanaa ‘Why Always Me?’ ama “Maxaa mar kasta kaliday loo eegtaa’’.
Goolkii Marcus Rashford guusha ugu horseeday United ciyaartii Etihad Stadium, ayaa ahaa goolkii u dambeeyey ee Manchester Derby laga dhaliyo xili ciyaareedkii hore.
Rodríguez, Bale Iyo Ramos Oo Diyaar U Ah Kulanka Madrid Derby
28/09/2015 Abdiwahab Ahmed
Wararkii Ugu Dambeeyey Ee Dhaawaca Ronaldo Iyo Kulamada Uu Ka Maqnaan Doono